Shir Talo Qaran Iyo Dib-u-dhacyada Doorashooyinka. Faallo- Cali Cabdi Coomay – somalilandtoday.com
Shir Talo Qaran Iyo Dib-u-dhacyada Doorashooyinka. Faallo- Cali Cabdi Coomay
Wakhtiyadii nidaamka xisbiyada badani hannaqaaday waxa ay doorashadu dib-u-dhacday sannadihii 2008, 2015 iyo 2017. Sidii dib-u-dhacyadii hore oo kale ayaa la raacay qoddobada distoorka ee qeexaya iyo waxa la yeelayo markii doorashadu qabsoomi weyday, duruuf kastaa ha jirtee. Dib-u-dhacyadii doorashada ee wakhtigii madaxweyne Riyaale waxa jiray qaar ka tirsan hogaanka dhaqanka Soomaalilaan oo ku dhawaaqay waxa ay ugu yeedheen ‘SHIR TALO ISAAQ’, hasayeeshee xukuumaddii wakhtigaasi ayaa horjoogsatay oo qaarkood jeelasha ku gurtay, waayo distoorka ayuu ka horimanayey.
Guddigii diiwaangelinta lama samayn, si dadka codaynaya loo ogaado
Xuduudihii dalka lama wada gaadhin
Xaalada dalka oo weli ku jirta amaan-daro, maadaama oo Burco lagaga dhawaaqay gole Salaadiin iyo siyaasiin isugu jirta.
Iyada oo ay saddexda xisbi qaran hore isula gaadheen heshiish dhigaya in lix bilood loo kordhiyo xukuumada madaxweyne Siillaanyo, oo ku dhammaanayso bishii Oktoobar ee sannadka 2017, ayey arrintu u gudbubtay golaha guurtida. Guddoomiyaha Golaha Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa guddi ka kooban 21 xubnood u saaray muddo kordhin labaad oo loo sameeyo golayaasha Soomaalilaan oo ay dhammaatay muddo-xileedkoodi. 74 mudane oo ka tirsan Golaha Guurtida ayaa u Codeeyay in 9 bilood la kordhiyo mudo Xileedka Madaxweynaha, iyo Madaxweyne ku xigeenka JSL. Yaas oo ka dhigan in Doorashada Madaxtooyada la qabto Bil ka hor Muddo Xileedka Madaxwaynaha Bisha November Isla Sanadkan 2017 ka.
MUDDO KORDHINTA XUKUUMADA IYO GOLOYAASHA QARANKA JSL